Zonke iinketho zokubukela ibhola kulo nyaka | IPhone iindaba
Zonke iinketho zokubukela ibhola kulo nyaka
UAlex Vicente | | Ukuzonwabisa
Iiligi zaseYurophu ziqalisile ukuqengqa kule sizini 16/17 kunye nabo, amathandabuzo abuya kuninzi lwendlela okanye indawo abanokuthi balibone iqela labo kulo nyaka kunye nalo lonke ukhuphiswano oludlalayo. Emva kweentlekele zonyaka ophelileyo, ngokuthengwa kwe-BeIN amalungelo okuya kwiChampions, uMovistar akazange afune ukunika abasebenzisi bayo iChampions League de kube semva kweqonga leqela ngenxa yemeko ababecelwe ukuba babandakanye iindlela ezahlukeneyo ze-BEIN eMovistar +, iimfazwe phakathi kwezintathu ezinkulu (iMovistar, iVodafone kunye neorenji) ngokunikela ngeLiga BBVA, siza kukuxelela Onke amathuba kulo nyaka sinokonwabela imidlalo entle kwilizwe lethu.
1 Amalungelo oMabonwakude
2 Jonga ibhola, kodwa kwi-Intanethi
3 Ibhola ekhatywayo kunye nomqhubi wakho
I-BEIN ibonakala ngathi ibheje kakhulu kwibhola ekhatywayo kwaye kulo nyaka ugcina amalungelo ngoku ebizwa ngokuba yiLiga Santander (icandelo lokuqala laseSpain, elixhasa iSantander hayi iBBVA) kunye neLiga 1,2,3 (icandelo lesibini). Nangona kunjalo, IMovistar igcina amalungelo e «Partidazo», esasaza umdlalo wokuqala nowesibini awukhethayo suku ngalunye. Ukongeza, umdlalo ovulekileyo kulo nyaka uza kuba kwisitishi se-GOL esisasaza ivuliwe kwi-DTT. Isishwankathelo, siya kuba nezi ndlela zilandelayo zokubukela iiligi zaseSpain:
Yiba kwiLaLiga: Ngamajelo e-BeIn sizokwazi ukubukela umdlalo weSantander League ngaphandle kosasazo olunye oluvulekileyo kunye nolunye olukhethwe nguMovistar njenge «Partidazo».
UMovistar Partidazo: iya kusasaza umdlalo wosuku olukhethwe yi-movistar eyokuqala neyesibini (ngokuqinisekileyo i-Classics yaseMadrid-Barça izakusasazwa apha, iBetis-Sevilla, R. Sociedad- Ath. iBilbao, iMadrid-Atlético derbies, njl.).
IGOLI: apho sinokubona khona umdlalo ovulekileyo veki nganye oza kubandakanya amaqela angadlaliyo kukhuphiswano lwaseYurophu.
Ngokubhekisele kwimincintiswano yaseYurophu kunye nezinye iiligi, ipanorama yahluke mpela kuleyo sinayo neeligi zaseSpain. Njengesiqhelo, sinokubukela umdlalo ovulekileyo weChampions League ngoLwesibini, kukho ukhetho lokubukela iPremier League, iBundesliga, iSerie A kunye neLigue 1 kodwa kule meko amalungelo asasazwa ngakumbi, oko kushiya ulwabiwo lwento nganye:
UAntena 3: izakusasaza kwakhona umdlalo wangoLwesibini weChampions League ovulekileyo ngenkqubo yayo "yeChampions Territory", kunye nokukwazi ukusasaza isishwankathelo sayo yonke eminye imidlalo wakugqiba usuku.
Bein Imidlalo: IChampions League iyanikezelwa kulo nyaka, ngaphandle komdlalo odlalayo kunye ne-UEFA Europa League, kulo nyaka eya kuba ngaphandle kosasazo lwasimahla. Iya kubandakanya iSerie A yase-Italiya okanye i-French Ligue 1.
Umdlalo webhola ekhatywayo weMovistarIkhethekileyo inikwa kwinqanaba lomqhubi, hayi kuphela iPremier League kunye neBundesliga. Alithandabuzeki elokuba yimpahla elungileyo elungiselela iMovistar kulo nyaka ngendlela enomdla ngayo kwiPremier League.
Jonga ibhola, kodwa kwi-Intanethi
Ngokumalunga namaxesha ambalwa edlulileyo, bekuyinto eqhelekileyo ukuba ubenakho ukubukela ibhola ngaphandle kokuyithenga ngokuthe ngqo kunye nomqhubi kwaye unokhetho lwesivumelwano kwi-Intanethi sokubukela imidlalo kwi-intanethi.
Olunye ukhetho kuku BeIN Qhagamshela, apho onke amajelo e-BEIN anikezelwa kwinkcazo ephezulu kwaye apho unokubona khona iSantander League, League 1,2,3, BeIN Sports kunye neGol. Kubandakanya yonke inkqubo enikezelwa ngala majelo ngaphandle kwezithintelo. Ixabiso li € 9,99 ngenyanga ngaphandle kwesigxina.
ITedi TV Lolunye ukhetho ukubukela ibhola ekwi-intanethi. I-Tedi TV inokukhetha ukuqesha amajelo ofuna ukuwabukela ngendlela ephucukileyo kwaye ngenxa yoko, unokuhlengahlengisa ixabiso ngakumbi (kodwa ukubona into efanayo neBeIN Connect kuya kubiza kakhulu). Nangona kunjalo, ivumela ukuqeshwa kweMovistar Partidazo, ukhetho olungenayo iBeIN Connect. Amaxabiso aphathwa ngokungafaniyo kwi-Intanethi ngala: € 9,95 ukuze ubukele iBeIN LaLiga kwaye ubone iSantander League kunye ne1,2,3 League; € 4,95 yeMovistar Partidazo kunye ne- € 9,95 yezeMidlalo yeBeIN.
Unokuzikhuphelela usetyenziso lwezi ndlela zimbini ezikwi-Intanethi kwifowuni yakho ye-iOS apha:
Ibhola ekhatywayo kunye nomqhubi wakho
Ngaphandle kwamathandabuzo, olona khetho lusetyenziswa ngumntu wonke kukunikezela ikhontrakthi ngebhola ekhatywayo kunye nomqhubi wakho, nangona kunjalo, nazi iinketho eziphindaphindwayo kuba umqhubi ngamnye enikezela kunye nepakeji ngesithembiso ngasinye. Sizahlulahlula ngumsebenzisi ukwenza lula.
IMovistar isinika iiphakheji ezininzi ezibandakanya ibhola. Zonke zinethuba lokuzibukela kwi-Intanethi ngenkonzo yazo ye-Yomvi, kodwa kuphela ziindlela ezinesivumelwano kunye nale phakheji. Ezi phakheji zinokudityaniswa kweselfowuni + yedatha + ye-intanethi (ifayibha okanye i-ADSL), ke asithethi ngeephakeji ezizodwa zokubukela ibhola kodwa njengepakethi. Sinezinto ezilandelayo:
Umdibaniso + 30: elona xabiso liphantsi leMovistar apho libandakanya khona iitshini zeBEIN ukuze zikwazi ukubona kuphela iSantander League, i-1,2,3 League kunye neCopa del Rey. Ukuba kuphela kwento enomdla kwiligi yaseSpain, le yiphakheji yakho neMovistar. Kodwa lumka, ayibandakanyi iMovistar Partidazo, ke ngekhe ubenakho ukubona umdlalo obalaseleyo weveki nganye. Ikwabandakanya ilayini yeselfowuni ene-3GB, iifowuni ezingenamda kunye ne-30 Mb Fibre. Ixabiso li- € 70.
Umdibaniso + 300: Ngale phakheji, ukongeza ekubeni ukwazi ukubona iiligi zaseSpain ngaphandle komdlalo osasazwayo osasazwa kwiMovistar Partidazo, uya kuba nakho ukubona yonke inkqubo yaseYurophu enikezelwa yiBeIN Sports. Ixabiso li- € 85 ngentambo yeselfowuni eyi-3GB, iminxeba engenamda kunye ne-300 Mb symmetric Fibre.
Umdibaniso + 2: le phakheji thina ibandakanya yonke ibhola ekhatywayo. ILiga, iCopa del Rey, iChampions, i-UEFA Europa League, iPremier League, iBundesliga, i-Eredivise, iSerie A, iLigue 1… Inazo zonke iindlela ze-BEIN, iMovistar Partidazo neMovistar Fútbol. Asiyi kuphoswa ngumdlalo omnye ngolu khetho. Ixabiso li- € 110 nge-300 Mb yefayibha ehambelanayo, imigca emibini ephathekayo ene-3 GB kunye neefowuni ezingenamda.
Ukongeza, ukuba sele ungumthengi weMovistar, ungaqala ukubona zonke iinkqubo ozibambe kwiYomvi:
IVodafone inesona sibonelelo sinoburharha ngaphambi kokuqala kukaSeptemba. Inika yonke ibhola ekhatywayo nge- € 6 ngenyanga ukuba uyiqesha ngaphambi kwe-31/08 kude kube sekupheleni kwexesha. Le ntengiso inyusa iiligi zaseSpain, iCopa del Rey, iChampions League, i-UEFA Europa League, iLigue 1, iSerie A ... yonke inkqubo ebandakanyiweyo kumajelo eBeIN Sports, BeIN LaLiga, Movistar Partidazo. CNgalo mnikelo singaphuthelwa kuphela yiPremier League kunye neBundesliga.
Iphakheji yebhola ekhatywayo: Ukuze ukwazi ukwenza ikhontrakthi yebhola kwi-6 Euro, kuyimfuneko ukwenza ikhontrakthi kunye neVodafone ebandakanya iFiber, iselfowuni (idatha + yeminxeba) kunye nomabonwakude. Iphakheji esisiseko ihamba kwi- € 46 kubandakanya ibhola ekhatywayo, i-120Mb yefayibha esuka kwi-ONO, ilayini ehambayo eyi-1 ene-2GB kunye nemizuzu engama-200 kwiminxeba kwaye ingahluka ukuya kuthi ga kwi-125 Euro Kuxhomekeke kuqwalaselo oludingayo, indibaniselwano yeTV + Ifayibha + Idatha kwifowuni ephathekayo + nenombolo yemigca.
IVodafone inethuba lokubukela yonke inkqubo enesivumelwano kunye nayo, ibhola ekhatywayo ngokusebenzisa iVodafone TV app:
Iorenji inezibonelelo ezininzi zefayibha + yemigca ehambayo apho iipakethe zikamabonakude ezikhethiweyo zinokongezwa khona, kwimeko yebhola ekhatywayo. Izibonelelo eziphambili zeorenji zezi:
Kangaroo yosapho: Esi sipho siquka i-300 Mb yefayibha yokulinganisa okanye i-50Mb ukongeza kwi-10 GB yedatha kwimigca emibini ehambayo ebandakanya. Ixabiso ngoku li- € 39,98 kwiinyanga ezintathu zokuqala kunye ne- € 3 kwinyanga yesine. Kule nto kufuneka kongezwe iphakheji yeBhola ekhatywayo yeOrange TV, ebandakanya iBeIN LaLiga ukubukela isahlulo sokuqala nesesibini, iMovistar Partidazo kunye neCopa del Rey yonke ngexabiso le- € 91,95 ngenyanga kwaye ukuba ufuna ukubona iintshatsheli, 9,95 € ngenyanga kuphela kwi-BeIN Sports ebandakanya iiNtshatsheli kunye ne-UEFA Europa League. Ukuhlala kwi Ixabiso le- € 54,93 kwiinyanga ezintathu zokuqala kunye ne- € 106,9 ngenyanga (ixabiso eline-50Mb hayi i-300, lehlisiwe ukusuka kwinyanga yesi-4 ukuya kwi-94,9).
Kangaroo Unlimited: kubandakanya i-300 Mb ye-fiber symmetric okanye i-50Mb, ilayini yeselfowuni ene-4 GB kunye neefowuni ezingenamda kwi- € 29,48 kwiinyanga ezintathu zokuqala kunye ne- € 3 ukusuka kwinyanga yesine (okanye i-70,95 xa uthatha i-58,95Mb). Ukongeza i-50 kunye ne-9,95 yebhola ekhatywayo kwimeko engaphambili, iya kuba njalo € 44,43 kwiinyanga ezintathu zokuqala kwaye kuma-85,9 ukusuka kwinyanga yesi-4.
Ugcino lweKangaroo: esona sitishi sinexabiso esincinci esivela eorenji, esinama-300 okanye ama-50 Mb efayibha yokulinganisa, ulayini omnye ohambahambayo onee-2GB kunye nemizuzu engama-200 kwiminxeba, siya kuba nexabiso lokugqibela ngebhola ekhatywayo € 38,43 ngenyanga ezintathu zokuqala kunye no-73,9 ukusuka kwi-4.
Ewe, iOrange nayo inamathuba okujonga iinkqubo zayo ezikwi-Intanethi kwiapp yayo onokuyifumana apha:
Njengoko ubona, iMovistar + kunye neFusion + 2 yayo yi ukhetho kuphela olubandakanya yonke ibhola ekhatywayo Nangona kunjalo, bekukho kwaye bekukho iYurophu eYurophu kulo nyaka, nangona kunjalo, ixabiso labaqhubi abathathu abaphambili ngesona sipho sabo sifanelekileyo liyafana phakathi kwabo.
Ke sinemibono kamabonakude ukuze sikwazi ukubona yonke ibhola kulo nyaka. Ngoku kuhlala kuphela ukukhetha ukhetho olulungele iimfuno kunye nokukhethwa komntu ngamnye ukuze ube nakho Ukonwabela unyaka omnye kwezemidlalo ngokugqwesa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » IPhone iindaba » Ukuzonwabisa » Zonke iinketho zokubukela ibhola kulo nyaka
diego t sitsho
iposti elungileyo kakhulu. Enkosi
Phendula ku diego t
Intlawulo entsha yeFitbit 2 kunye neFitbit Flex 2 icociwe
UFrank Ocean ukhupha i-albhamu yakhe ebonakalayo kuphela kwi-Apple Music